“जसले खान्छ साथी बन्छ” शायद तपाईंहरुले पनि यो वाक्यंश सुन्नु भएको होला टेलिभिजनमा । यो एक जमानामा निकै चलेको हाजमोला क्यान्डी चकलेटको बिज्ञापनको वाक्यंश हो । तपाईंहरुले पनि शायद अनुमान लगाइ सक्नु भयो होला कि यो बिज्ञापन कस्तो थियो भनेर । यदी तपाईंहरुलाई थाहा छैन भने संक्षिप्त रुपमा सुन्नु होला है त । पानी परि रहेको समयमा एउटा ब्यापारी हातमा ब्याग लिएर आई रहेको हुन्छ, त्यति नै खेर एउटी सानी फुच्ची केटी पनि छप्ल्याङ छप्ल्याङ गर्दै ऊ भए तिर नै आउछ । जसले गर्दा पानीको छिटाहरु उसको सेतो धोतीमा लाग्छ । धोतीमा दाग लागेर देखेर त्यो ब्यापारी त्यो सानो फुच्ची केटीलाई झम्टिन पुग्छ, त्यती खेर नै त्यो बच्चाले आफ्नो हातमा हाजमोला क्यान्डी निकाल्दै भन्छ “जसले खान्छ साथी बन्छ” । त्यस पछीको समयमा दुबै जना पानीमा खेल्न थाल्छ ।
This entry was posted on शनिवार, जुन 27th, 2009 at 11:5 and is filed under "सस्मरण".	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
“जसले खान्छ साथी बन्छ” को एउटा प्रतिक्रिया
वसन्त भन्नुहुन्छ:	जुलाई 29, 2009 मा 11:5	यो सानो प्रयास राम्रो लाग्यो। निरन्तरताको शुभकामना!